SEO taban dhibkaaga maaha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/SEO taban maaha dhibkaaga
SEO taban maaha dhibkaaga
SEO-ga xun waa dhaqanka si ula kac ah loo waxyeeleeyo goob kale iyada oo loo marayo dhaqamada hadh iyo daacadnimada, sida isku xirka ilaha spammy.
Hagaajinta mashiinka raadinta taban waa dhaqanka si ula kac ah loo waxyeeleeyo taraafikada raadinta dabiiciga ah ee goobta dhinac saddexaad. Nidaamku wuxuu inta badan ku lug leeyahay isku xirka barta spammy-goobyada xoqida, porn-ka, malware-ka-cudud-ku-taabashada ah.
Maamulayaasha shabakadaha kama hortagi karaan SEO-ga xun. Markaa waxay cabsi badan ku abuurtaa milkiilayaasha iyo maamulayaasha e-commerce.
Laakiin cabsidaas ayaa ah mid xad dhaaf ah oo laga yaabo in aan loo baahnayn. Tan iyo wakhtiga dhabta ah ee Penguin 4.0 algorithm wuxuu ku noolaa 2016, Google wuxuu sheeganayaa in isku xirka spammy aysan waxyeello u geysan doonin taraafikada ilaa goobta ay ku hawlan tahay ficillo xunxun lafteeda, sida nidaamyada isku xirka aan dabiiciga ahayn ama goobta ereyada muhiimka ah ee goobta.
Si aad u hubiso, SEO-ga xun wuxuu ka dheeraan karaa xiriirinta spammy. Dib u eegisyada been abuurka ah iyo cabashooyinka been abuurka ah ee Google My Business, tusaale ahaan, waxay sababi karaan waxyeelo. Intaa waxaa dheer, xeeladaha (dambiyada) ka sii daran ee ku lug leh jabsiga, gelista malware-ka iyo spamka, iyo diidmada weerarrada adeegga waxay dhammaantood saameyn karaan taraafikada raadinta dabiiciga ah.
Arrimo badan ayaa sababi kara hoos u dhac ku yimaada taraafikada raadinta organic. Marar dhif ah, had iyo jeer, waa SEO taban.
Arrimaha farsamada ayaa si badheedh ah uga soo bixi kara kooxdaada horumarineed ee ka hortagaysa gurguurashada iyo tilmaanta. Google waxa ay cusboonaysiin kartaa algorithm-keeda. Qayb muhiim ah oo ka mid ah macluumaadka ayaa laga saari karaa goobtaada. Dhammaan kuwani waa ficillo aan waxba galabsan (iyo kuwo caadi ah) kuwaas oo dhaawici kara taraafikada raadinta dabiiciga ah.
Sababaha aan waxba galabsan waxaa ka mid ah isticmaalka ereyada muhiimka ah ee goobta kaliya ee makiinadaha raadinta ama ku lug yeelashada isku xirka khiyaanada ee ka mid ah, laga yaabee, shabakadaha la xiriira.
Haddii xidhiidhada khiyaanada leh ay mar ka caawiyaan goobtaada darajada ka dibna Google ayaa qiimeeya iyaga, goobta ayaa la kulmi doonta hoos u dhaca taraafikada. Taasi rigoore maaha. Waa Google ogaanshaha dhaqan aan habboonayn oo meesha ka saaraysa awooddeeda ay ku saamaynayso natiijooyinka raadinta.
Google ayaa ruxday natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Penguin algorithm ee 2012, iyada oo la beegsanayo spam web guud ahaan iyo dhaqamada isku xirka liita gaar ahaan.
Nasiib darro, afartii sano ee ugu horreysay Google waxay cusboonaysiisay Penguin dufcad. Haddii ay heshay ciqaab la xidhiidha Penguin, goobtaadu waxay dareemi doontaa saamaynta waxqabadka ilaa cusboonaysiinta Penguin ee soo socota.
Sannadkii 2016, Google wuxuu ku daray Penguin algorithm-keeda-waqtiga dhabta ah. Tani waxay u ogolaatay boggaga inay ka soo kabtaan ciqaabta Penguin-ku keentay isla marka Google uu ogaado in goobta iyo profile profile-ka ay isbeddeleen.
Cusboonaysiinta isla 2016 ayaa sidoo kale badashay sida Google uu u qiimeeyo xidhiidhada xun - laga bilaabo goobaha hoos u dhigista ee leh xidhiidhada liita ilaa kaliya in la dhimo xidhiidhadaas. Taas macneheedu waxa weeye, malaha, in Google-ku aanu hadda ku xisaabin xidhidhka liita ee goobta. Taa beddelkeeda, waa ay iska indhatirtay iyaga. Ka dib oo dhan, goob kasta waxay helaysaa spammy, xiriiriyeyaasha aan la rabin. Isbeddelka Google wuxuu aqoonsaday firfircoonaantaas.
Sidaa darteed uma badna in goobta ku dhaqma SEO togan ay saameyn ku yeelato xiriiriyeyaasha taban.
…goob kastaa waxa uu helayaa isku-xidhayaal aan la rabin.
Falanqeeyaha Google Gary Illyes ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah codsiyada SEO ee taban uu dib u eegay, dhammaan goobuhu waxay lahaayeen arrimo kale oo sababay hoos u dhaca waxqabadka raadinta dabiiciga ah. Waligii ma uusan arag tusaale ka mid ah qiimeynta saameynta SEO-ga xun.
Waxa xiisaha lihi leh, aaladda diidmada Google ayaa weli jirta. Waa maxay sababta ay lagama maarmaanka u tahay haddii xiriiriyeyaasha spammy aysan saameyn ku yeelan?
John Mueller oo ka tirsan Google ayaa dhowr jeer ku celceliyay in Google loo qaabeeyay algorithm ahaan in ay iska indhatirto xiriirka xun. Qalabka diidmada waa "runtii wax aad u baahan tahay oo kaliya inaad isticmaasho xaaladaha dhabta ah," sida haddii aad ka hesho fariin ciqaabeed gacanta Google ah.
Kraft Heinz: Qofna miyaanu caawinayn astaantaas liita?
Haa, waxaad ku furi kartaa iPhone-ka dabool folio ah. Waa kan sida.